के यस बर्ष सोनिकाले विवाह गर्लिन त ? - Complete Nepali News Portal
१४ असोज २०७७
के यस बर्ष सोनिकाले विवाह गर्लिन त ?
ScotNepal May 24, 2020
काठमाडौं । चर्चित मोडल एवं युट्यबर सोनिका रोकाया वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन लागेको उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुक मार्फत सार्वजनिक गरेकीन छिन् । कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण जारी लकडाउनमा गाउँ (बझाङ) मा रहेकी सोनिकाले आफु छिटटै विवाहिक जिवनमा प्रवेश गर्न लागेको बताएकी हुन । बझाङमा रहेकी सोनिकाले पछिल्ला दिनहरुमा लगातार आफ्ना तस्वीरहरु सेयर गर्दै आएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आफ्ना थुप्रै तस्वरिहरु साझा गर्दै आएकी छिन् ।
विहेका विषयमा हामीले उनै सोनिकालाई सोध्दा उनले विहेका लागि तयारी हुँदै गरेको तर कहिले हुने भन्ने कुरा पक्का नभएको जवाफ फर्काइन् । अहिले सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न सोनिका पुजा रोकायका नामले पनि चर्चामा रहेकी छिन् । उनी विभिन्न समयमा विभिन्न कारणबाट सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद किसिमको भडकिलो कार्य गदैँ सामाजिक सञ्जालमा अfफनो आधिपथ्य जमाउदै आएकी थिइन ।
उनी समयसमयमा विभिन्न कारणले गर्दा विवादमा पनि पर्दै आएकी छिन् । उनले को सँग र कहिले विहे हुन्छ भन्ने विषयमा केही खुलाइनन् । तर उनका अनुसार उनले आफ्ना फ्यानहरुका लागि यस वर्ष नै शुभ समाचार दिने तयारी रहेको उनले बताइन । उनी निकट स्रोतका अनुसार सोनिका केही समय देखी प्रेममा रहेको र यसै बर्ष उनको लगन गाठो गासिनेमा दुईमत नरहेको स्रोतको दावी छ ।
समृद्द नेपालको शिक्षा प्रणालीकोलागि सूचना प्रबिधिले
६८ बर्षे बृद्धको बेदना: श्रीमती र
‘के हो मायाजाल’ मा चर्चित गायिका
अन्तरिक्षमा ० डिग्रीदेखि ३० डिग्रीमा अवस्थित
आजको राशिफल असोज १५ गते बिहिबार
पोखरीमा विष हालेर गोरखामा किसानको ६
कुलमानको ध्यानमा नपुगेका ४ कुराहरु
दुनिया लट्ठ पार्ने जादुमय स्वर भएका
‘के हो मायाजाल’ मा चर्चित गायिका मिरा (भिडियो सहित)
श्रेयाको निर्देशनमा मनिषा पोखरेलको ”जुनी जुनी ” भिडियो सहित ।
विन बेडवालको ‘मुटु भित्रै राख्छु तिमीलाई’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
मोडलिङ्गमा फरक पहिचानसहित अब्बल बन्दै शंकर
अति नै मार्मिक गीत गायक बद्री पंगेनीको स्वरमा ”बाटो हेरी...
गायक राजेश सापकोटाको “आज फेरि“ भिडियो सहित ।